Sakafo henan'akoho ao anaty saosy karaoty sy leek | Recipe ao an-dakozia
Sakafo henan'akoho ao anaty karoty sy saosy leek
Maria vazquez | | Resety hena
Ny meatball dia tsy ampahany mahazatra amin'ny menio fanaoko isan-kerinandro nefa tena mankafy azy ireo. Ny henan-kena ho an'ny mpamboly dia tsy isalasalana fa ny tiako indrindra fa tsy fahita firy fa raha te ho tafiditra ao anaty pantry aho dia mahandro kinova hafa toa ity iray ity Sakafo henan'akoho ao anaty karoty sy saosy leek.
Ny akoho dia safidy tsara hafa amin'ny hen'omby. Ny tsirony dia malefaka kokoa noho ilay farany, fa raha ampiarahina amin'ny saosy legioma dia lasa tsy izy ireo ihany lovia matsiro be, fa salama ihany koa. Tsy te hanandrana azy?
Azonao atao ny mameno ny menio mampiditra kapoaky ny vary masaka miaraka amin'ny saosy na koa manompo salady voankazo sy legioma tsara. Ireto henan-kena ireto dia azo atao mangatsiaka ihany koa, ka tsy maharary mihitsy ny manamboatra vitsivitsy fanampiny hihinana tsara amin'izany andro izany rehefa tsy tianao ny mahandro.
Ny henan'akoho ao anaty saosy sy karaoty dia safidy matsiro sy mahasalama hamenoana ny menio. Aroso amina vary na salady izy ireo.
Fotoana manontolo: 50 M
Ho an'ny henan-kena
400 g. hena akoho voatoto
Tongolo,, voatetika be
Sombin-mofo iray notampohan-dronono ary nalatsaka (tsy voatery)
Persily voatetika 1 sotrokely
Lafarinina ho an'ny sarona
Menaka oliva fanampiny ho an'ny fanendasana
Tongolo lehibe 1, notetehina
Poakaty 3, notetehina
Saosy voatabia 2 sotro fihinanana
½ sotrokely paprika
1-2 kaopy legioma na rano
Manomana ny saosy izahay. Mba hanaovana izany dia manafana diloilo roa sotro fihinana ao anaty lapoely ary endasina ao ny 10 tongolo voatetika, dipoavatra, poaka ary karaoty mandritra ny 12-XNUMX minitra.
Avy eo, asio sira sy dipoavatra, ampio ny voatabia nendasina sy paprika ary afangaro.
Farany, arotsaho ny ron-kena na ranona legioma, rakofana ary mahandro mandritra ny 15 minitra ary avy eo afangaro. Raha matavy loatra ny saosy dia tsy mila manampy rano na broth fotsiny ianao.
Mandritra ny fandrahoana ny saosy dia amboary ny hena amin'ny fangaro amin'ny fangaro rehetra afa-tsy ny lafarinina sy menaka oliva.
Raha vao mifangaro tsara dia maka koba kely vitsivitsy ary manamboatra azy ho lasa henan-kena.
Manaraka izany, ampandalovinay amin'ny lafarinina ny henan'omby ary endasina amin'ny fangaro amin'ny menaka mafana mandra-pahatongan'ny volontany volamena.
Rehefa volontsôkôlà izy ireo dia apetrantsika ao anaty saosy izay ho torotoro ankehitriny. Ao amin'ny saosy mangotraka izay hahavita 3 minitra.
Manolotra ny henan'akoho ao anaty karaoty mafana sy saosy poaka izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: firosoana » vilia » Resety hena » Sakafo henan'akoho ao anaty karoty sy saosy leek
Spinach, Strawberry ary salady amin'ny Fig miaraka amin'ny Honey Vinaigrette